Landa umkhondo wokumba
I-SWMC 360-DTH Drilling RIG KWIINDAWO ZOKWAKHIWA KWIPHONDO LESHANDONG, ECHINA
I-Xuanhua yokumba i-rig yenze enye impumelelo eqaqambileyo- iiyunithi ezingama-50 ze-SWMC 360 zokomba iRIGS zisebenzise ngaphezulu kweetoni ezili-1,800 zeziqhushumbisi ngaphantsi kwenyanga enye, ngaphezulu kokuphindwe kabini ukusetyenziswa kwemihla ngemihla. Tianchen Qixiang nenayiloni New Project Project, iprojekthi ephambili kwiPhondo Shandong kunye ...
I-SWMC T45-TH EQHUBA I-RIG ISEBENZA KWI-LIMESTONE QUARRY YOKUTSHINTSHA ISITHILI SOKUQALA
Umgodi we-Fengshan, obekwe kwisiThili saseChangping, eBeijing, sisiseko sempahla ekrwada yaseBeijing Cement Works Co, Ltd., neyalinganiswa njenge- "National Green Mine Pilot Unit" yi-Ofisi yoMphathiswa Wezomhlaba nezixhobo ngo-2011. yamashishini okuqala esamente ukudlulisa ...
I-SWMC 370 engaphantsi komhlaba yokomba isixhobo sigqibe ngempumelelo iprojekhthi yesiseko seprojekthi yokuthengiswa kwezindlu eGuangzhou, China. Iprojekthi yokuthengiswa kwezindlu eGuangzhou igubungela ummandla we-62,000 m2, apho i-44,000 m2 ingaphezulu komhlaba kwaye i-18,000 m2 iphantsi komhlaba. Kukho imigangatho engama-25 ngaphezulu komhlaba ...
Ngenxa yokunqongophala kwamandla emveli, ukuphuhliswa kunye nokusetyenziswa kwamandla amatsha kutsale umdla wawo onke amazwe emhlabeni.Kwangelo xesha, amandla amatsha e-photovoltaic eTshayina akhula ngokukhawuleza, kwaye itekhnoloji iyakhula ngokuthe ngcembe, isondela okanye iphinde ifike. ..
Ngo-Septemba-ikota yokuwa ezayo, ixesha lokuvuna elineziqhamo ezityebileyo kunye nokusasaza ivumba elimnandi! Ugandaganda ofaka umsebenzi onzima wabasebenzi beHBXG yeProjekthi yePetroli yaseRashiya ephumeleleyo yiHBXG ithunyelwe ngempumelelo kwintengiso yeCIS kwakhona! Olu kukuthengwa kwethenda yesibini ye ...
I-SWMC, umvelisi womatshini wokugrumba, ngendlela efanayo yokubonelela ngeemveliso zomatshini ezipheleleyo kubathengi, isebenzisa iminyaka engaphezu kwama-20 yamava oshishino ukubonelela ngezisombululo ezinokuthenjwa kubasebenzisi boomatshini bokugrumba abangaphantsi kunye nokunceda abathengi ...
Ngomhla kaMatshi 12, 2020, ibhetshi ye-SD7N ephakanyisiweyo-i-bulldozer yathunyelwa kwizibuko kwaye ilungele ukulayishwa kwemakethi yemimandla yeRussia kunye ne-CIS. Le batch bulldozers ithengwa ngumthengi wezemigodi, ukwenza umsebenzi wokubamba kunye nokufumba izinto zokugubungela. Bathenga ...
Ukujongana nokuqhambuka kwesibetho se-coronavirus, abasebenzi be-SWMC bathatha onke amanyathelo afanelekileyo okuqinisekisa "ityala lokusuleleka nguZero", kwaye bezama konke okusemandleni ukwenza ukuthunyelwa kwangexesha. Ngomhla wesihlanu kuMatshi ngo-2020, ibhetshi ye-TS160-3HW ngogandaganda yathunyelwa eMzantsi-mpuma ...
I-Xuanhua yokumba i-rig yenze enye impumelelo eqaqambileyo- iiyunithi ezingama-50 ze-SWMC 360 zokomba iRIGS zisebenzise ngaphezulu kweetoni ezili-1,800 zeziqhushumbisi ngaphantsi kwenyanga enye, ngaphezulu kokuphindwe kabini ukusetyenziswa kwemihla ngemihla. Tianchen Qix ...
Umgodi we-Fengshan, obekwe kwisiThili saseChangping, eBeijing, sisiseko sombane esikrwada seBeijing Cement Works Co, Ltd., neyalinganiswa njenge- "National Green Mine Pilot Unit" yi-Ofisi yoMphathiswa ...
Ngenxa yokunqongophala kwamandla emveli, ukuphuhliswa kunye nokusetyenziswa kwamandla amatsha kutsale umdla wawo onke amazwe ehlabathini.Kwangelo xesha, amandla amatsha e-photovoltaic ase China ...